शब्दकोश: दसैँ संस्कृति : ढाडमा टेक्ने चाड ?
दसैँ संस्कृति : ढाडमा टेक्ने चाड ?
CaFe ब्लगको पछिल्लो मेन्यूभित्र बिदाको बारे अक्षरपरिकार पस्किँदै गर्दाको धपेडीसँगै म काठमाडौँ खाली गर्नेको सूचीमा एउटा उम्मेदवार बन्ने ताउरमाउर पनि जनाउँदै थिएँ । महानगरपालिकको बहीखाता नपल्र्टाई काठमाडौँ खाल्डोको खाँटी जनसङ्ख्या पत्ता लगाउनु छ भने दसैँ कुर्नुपर्छ भन्ने उखानजस्तै बनिसकेको अवस्थामा म पनि त्यही हिसाब मिलाउनझैँ जिल्लातिर हानिँदै थिएँ । असोजको पहिलो साता कान्तिपुर नगरी छाडेर उदयपुर प्रस्थान गर्नुअघि ब्लगमा छाडेको बिदालेखको पट्ठो पात्र आफैँ बनिएला भन्ने अन्दाज थिएन । तर सोइपरि भयो, म आफैँ यो विद्युतीय अक्षरकार्यालयबाट बिदा लिएसरि ओथारोको कुखुरी बनेर हराइरहेँ ।
यसरी सातादिनभन्दा लामो बिदामा ब्लगबाट गयल हुनुको बाध्यताबारे पनि स-सानो कथा हालिहालौँ । समस्या अरु होइन, प्रविधिकै हो । देशले सूचना/प्रविधिमा सोचेभन्दा अपत्यारिलो रफ्तारमा कोल्टे फेरिरहेको छ । बिस्तारै अहिलेको भन्दा पनि सर्वसुलभ पहुँचमा प्रविधि पुग्ला । यसर्थः समस्या राष्ट्रिय प्रविधिमाथि थोपरेर पन्छिन मिल्दैन । मेरो हकमा समस्या त व्यक्तिगत प्रविधिकै रहृयो । युनिकोड नेपालीसहितको कम्प्युटरसँग काठमाडौँ बिदाइसँगै सम्बन्ध विच्छेद भएपछि अभिव्यक्तिको भोकले छटपटिनुपर्ने स्थितिको पूर्वानुमान घर आउँदा यात्राबीचमै भइसकेको थियो । फेरि कस्तो हुँदोरहेछ भने, आफैँले जानेर मुड नभएर वा दैनिक घिसापिटानको बेफुर्सदीबाट गिजोलिएर नलेख्‍नु र समय मिल्दामिल्दै र मन हुँदाहुँदै पनि लेख्‍न नपाउनुको पीडा ज्यादै भिन्न हुँदोरहेछ । मैले त्यो पीडा चाखेँ । कुनै कुराको महत्वा र गरिमा त्यससँग बिछोडिएपछि जब्बर बनेर देखापर्छ, यस सत्य निरन्तर ब्लगिङबाट टाढिएको मेरो लागि अझ गाढा बन्यो । मन मानेन, तै घर आएर जसोतसो अङ्कलको कछुवा चालको कम्प्युटर थिचथाच पारेर मेसो मिलाएँ र यति लेखिन सम्भव हुँदैछ ।
सन्दर्भ दसैँकै । नेपालीलाई यस्तरी लाग्छ, स्वदेश-विदेश जहाँसुकै बसे पनि यसको तीव्र ज्वरोले परम्परालाई रमाइलो आत्मसात गर्न मन-मगजमा भरपूर तापक्रम प्रवाह गरिराख्छ । दसैँको तापक्रमले हिन्दु धर्मावलम्बीहरूलाई परम्पारको गर्भभित्र पारिवारिक-आत्मीय निकटता त कायम गराउँछ नै, साथै हरिबिजोग बाध्यता पनि गरिब-गुरुबाको दैलामा थोपर्छ । दसैँ आउँला बसाइँ जाउँला भनाइ नेपाली शब्दढुकुटी चुलिएर पोखिएका अतिशयोक्ति होइनन् । स्वाभाविक हो, चाडबाडको तातो रौनक र निक्खर परम्परिक रमरम गाउँघरमै पाइन्छ । यो संस्कारिक प्रवाह पूर्वीय संस्कृति र सभ्यताबाट पश्चिमाले धेरै पोष लिएजस्तै स्वाभाविब छ । तर अहिले सङक्रमणको लहर उल्टो देखिन्छ । सहरबाट ग्रामीण भेगले फेशनमय विकृतिको प्याकेज नै उठाएको र पूर्वीय समाज पश्चिमी दुनियाँबाट दूषित बन्दै गएको टिप्पणी बौद्धिक वर्गमाझ सुन्न पाइन्छ ।
परम्पराको नाउँमा दसैँले पशु हिंसालाई बढावा दिँदै लगेको दोष धार्मिकहरूको धारिलो विश्लेषणले दिएको छ । दसैँले मात्र होइन, हिन्दु सम्प्रदायका अन्य कैयन् कर्मकाण्डले बलिप्रथालाई अकाट्य मान्दै संस्कारको लाहाछाप लगाएर निरन्तरता दिएका छन् । दसैँ भनेकै माछामासुको चाड भन्ने रुपमा विकसित हुँदै आएकोमा लरतरो विरोधी टिप्पणीले पशु काटमार रोकिने छाँट देखिन्न । एउटा प्राणीको खुसी र आनन्दोत्सवका लागि अर्को प्राणीले जीवनाहूति दिनुपर्ने संस्कारिक लीला पनि अपरम्पारकै लाग्छ । र अर्कातिर, जीव व्यवस्थाको सन्तुलनको लागि पनि काटमारको यो कार्य मनासिब सम्झिने जमात पनि आफ्नो ठाउँमा सही होला । अन्यथा प्राणीहरूको संख्यात्मक अनुपात बिग्रिएर समग्र प्राकृति व्यवस्था नै खलबलिन्छ भन्ने जीवशास्त्रीहरूको तर्क छ ।
निम्न वर्गको लागि चाडपर्वको कुनै रस नहुने सत्य हरेक समाजले झेल्ने गर्छ । नेपाली समाजमा पनि अरुको देखासिकी, इज्जत धान्ने मेलो र परम्परा निर्वाह गर्ने कार्यका रुपमा दसैँले निम्न वर्गको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर थला पार्ने गरेको छ । आफ्नो रहरको लागि नभए पनि परिवार र लालाबालाको वर्षदिनको खुसीको लागि उनीहरू सबैथोक जोहो गर्छन् । यो दोष दसैँको हो कि दसैँलाई महँगो गरी भोग्न खोज्ने रहरपालुवा सर्वसाधारणको ? सामान्य अवस्थामै दैनिक जीवन गुजारा गर्न गाह्रो पर्नेहरूलाई दसैँ आउनु भनेको कालले बिछ्याएको पासोमा अन्तिम मुकाबिला झेलिरहेको प्राणसरह सकस बेहोर्नु हो । र, संस्कारको नाममा समाजमा चलिरहेको यो प्रथा रोकिने छाँट देखिँदैन । चाडको नाममा ढाड भाँचिएको अनुभव सँगाल्नु तिनीहरू जीवनोत्सव भइरहनेछ ।
तपाईँ जहाँ रहे पनि सन्तुलित दसैँको मङ्गलमय कामना छ है !
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, October 03, 2008
Labels: समय-सन्दर्भ, समाज
अनाम पुस्तकालय October 13, 2008
उजेली October 18, 2008
मलाई पनि यो दसैँको नाममा गरिने फजुल खर्च एकदमै वाइयात लाग्छ । सन्तुलित भएर मनाए गज्जब भइहाल्छ नि !! किन देखाउनु पर्यो नभाको चुरीफुरी, होइन ?
Sudip Kafle and Sujan Kafle October 19, 2008
एकल यात्री October 31, 2008
सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामना
सुख, समृध्दि र प्रगतिको शुभकामना
दशैँले दशा कटोस् भन्ने
दीपावलीले अँध्यारो हटोस् भन्ने
नयाँ वर्षले नयाँ नेपाल बनाओस् भन्ने
नयाँ वर्ष (New Year) को शुभकामना
भोका पेटले खाना पाओस्
नांगा आङले नाना पाओस्
बासविहिन नहोस् कोही
सबले ओत लाग्ने छाना पाओस्